Vidim-bary eny an-tsena Amin’ny novambra vao hilamina
Manodidina ny 2000 ariary amin’izao fotoana izao ny kilaon’ny vary eny an-tsena.
Raha ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny varotra sy ny fanjifana dia tsy mifanaraka ny tolotra sy ny tinady eo amin’izay resaka fandraharahana ara-bary eto amintsika izay ka mahatonga ny fiakarana. Efa tsy ampy antsika intsony ilay vary hafarana amin’ny kaontenera izay tsy mahatonga afa-tsy 200 hatramin’ny 1000 taonina satria efa mitombo isa ny Malagasy. Mila eo amin’ny 100.000 taonina isan-taona eo mihitsy isika, raha ny fanazavana, ary izay no hanaovana antsoavo amin’ireo mpandraharaha hoe mila mitahiry maro satria rehefa betsaka ny miditra avy any dia mihena ny vidiny. Sambo mihitsy hoy ny minisitry ny varotra sy fanjifana, vao ampy satria manodidina ny 30.000 taonina ka hatramin’ny 120.000 taonina any no tanjona. Dia aiza ho aiza moa izany ny mikasika ny famokarana anatiny manoloana izany fanambaran’ny minisitera izany ? Marihina fa amin’ny faran’ny volana novambra izao, raha tafapetraka io paikady io, no miverina amin’ny laoniny ny vidim-bary, raha ny fanazavana hatrany.